कहाँ गए कञ्चनपुरका ७८ महिला ? – Everest Dainik – News from Nepal
कहाँ गए कञ्चनपुरका ७८ महिला ?
कञ्चनपुर, भदौ २ । कञ्चनपुरका तीन वटा नगरपालिका क्षेत्रबाट आव ०७४/७५ को असार मसान्तसम्म ७८ जना महिला हराएका छन् ।
बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट महिला हराएको भन्दै खोजतलासका लागि निवेदन परेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले जनाएको छ ।
हराएका ७८ महिलामध्ये २४ जना महिलामात्रै फेला परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालयले झलारीका प्रहरी निरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले भने, “अझै ५४ जना महिला फेला पर्न सकेका छैनन् ।” सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिका श्रीमती हराएका छन् ।
अर्कैसँग भागी विवाह गर्ने तथा रोजगारीको प्रलोभनमा परेर हराउने गरेको पाइएको छ । हराएका महिला बेचबिखनमा परेको भने पाइएको छैन प्रहरी निरीक्षक अवस्थीले भने, “बीस वर्षदेखि ४० वर्ष उमेरका महिला बढी हराएका छन् ।” हराउनेमा ५० वर्षसम्मका महिला पनि रहेको उनको भनाइ छ ।
सोही अवधिमा तीनवटै नगरपालिका क्षेत्रका ११ जना बालबालिका हराएकामा जसमध्ये नौ जना फेला परेका छन् । दुई जना अझै फेला परेका छैनन् । हराउने बालबालिका १४ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका बढी रहेका छन् । हराएका महिला र बालबालिका परिवारको सम्पर्कमा पुगे पनि प्रहरीलाई खबर नगर्दा सङ्ख्य धेरै देखिएको बताइएको छ । रासस
ट्याग्स: kanchanpur, women